Izindaba - Uyini Umkhiqizo Wangaphandle Odume Kunayo Emhlabeni?
I-Arc 'Teryx （Canada): Umkhiqizo wangaphandle ongaphandle waseCanada, owasungulwa eVANCOUVER, eCanada ngo-1989, ikomkhulu lawo, isitudiyo sokuqamba, kanye nolayini omkhulu wokukhiqiza kuseseVancouver. Ngenxa yokuphishekela kwayo ngobuhlanya ubuciko obusha nobuchwepheshe obusha, eminyakeni engaphezu kwengu-10 nje kuphela, isikhule yaba uphawu lwangaphandle oluhlonishwayo lwaseNyakatho Melika futhi oluhola umhlaba wonke, ngemikhiqizo emihle emkhakheni wezingubo nojosaka. Imikhiqizo yayo ibandakanyeka kakhulu kwezemidlalo yokuhamba izintaba, ukukhuphuka kanye neqhwa, ojosaka, okokugqoka, ukunaka imininingwane.
IBig Pack (eJalimane): isikhwama sokulala esikhwameni.
I-Columbia (e-United States): uphawu lokuqala lwangaphandle e-United States, amajazi emvula, amakepisi emvula, amabhulukwe angaphandle nezinsiza, izivimbanisi zomoya, izikibha, amahembe, amabhulukwe asebenzayo, ojosaka, izicathulo nokugqoka okushushuluza, njll.
UJack Wolf Skin (eJalimane): uphawu lokuqala olungaphandle. Ojosaka, izicathulo zangaphandle, amatende, izikhwama zokulala, izingubo ezahlukahlukene nezesekeli, njll.
ILafuma (eFrance): ojosaka abadumile bomkhiqizo waseFrance, izicathulo zangaphandle, amatende, izikhwama zokulala, izingubo ezahlukahlukene zokuhamba nezesekeli, izinto zokukhempa, njll.
I-LL Bean (USA): ithengisa imikhiqizo enhlobonhlobo yezokungcebeleka, kanye nemishini yangaphandle. Yonke imikhiqizo yayo ithengiswa ngoku-oda ngeposi nangokuthengisa okuqondile online, ngaphandle kwama-ejenti.
IMarmot (e-United States): okokugqoka kweqhwa, izikhwama zokulala eziphansi, namatende engqungquthela e-alpine kuyathandwa phakathi kwabathandi bezintaba.
I-Mountain Hardware (i-USA): izingubo zangaphandle, amatende, imininingwane ehamba phambili, umholi wezingubo zangaphandle.
IPatagonia (e-United States): IPATAGONIA ingenye yezimpahla zokugqoka zangaphandle ezinkulu kunazo zonke e-United States naseYurophu, futhi inezitolo eziningi zama-franchise emhlabeni wonke. IPATAGONIA kuyaqabukela izaphulelo, ezamsiza wasungula isithombe sezinga eliphezulu. Imikhiqizo kaPatagonia idume umhlaba wonke ngokugxila ekuvikelweni kwemvelo kanye nasekugcinweni kwemithombo. Umqondo wokuklama wePatagonia oholayo nezidingo zekhwalithi ezifunayo zenza imikhiqizo yawo izuze imiklomelo eminingi ekuhlolweni kwezinto eziningi zemidiya yangaphandle, futhi ikalwe njengomunye wemikhiqizo ethandwa kakhulu ngabathandi bangaphandle. Ukusikwa kwayo kwezingubo kungcono kuneminye imikhiqizo yangaphandle, futhi imininingwane nayo mihle kakhulu. Imikhiqizo yayo yoboya ithandwa kakhulu.
I-Vaude (Germany): imikhiqizo ifaka cishe yonke imikhiqizo yangaphandle. Ngokuya ngezingubo, inezinto zayo ezinelungelo lobunikazi.
INorth Face (i-USA): imikhiqizo ihlala isikhathi eside, futhi isukile emikhiqizweni esezingeni eliphakeme yaya kwimikhiqizo ethandwayo.
I-T'tiss (, Germany): Izikibha, amahembe, amabhantshi, amabhulukwe angavamile, njll.